Cameroon: Adolphe Lele Lafrique wuxuu ku boorinayaa dadka isticmaala warbaahinta bulshada in ay siiyaan fursad nabad ah - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Cameroon: Adolphe Lele Lafrique wuxuu ku boorinayaa dadka isticmaala warbaahinta bulshada in ay siiyaan fursad nabad ah
Guddoomiyaha gobolka Waqooyi Galbeed ayaa ku booriyay dadka isticmaala warbaahinta bulshada in ay xakameeyaan macluumaadka been abuurka ah ee ay maalin walba ka baxaan, si ay u siiyaan fursad nabad ah ee Cameroon.
Adolphe Lele Lafrique ayaa markale ku soo laabtay weerarkii millatari ee 04 bishii April ee ka dhacay tuulada Meluf, waaxda Bui, gobolka Waqooyi Galbeed, sida ay sheegtay Hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch (HRW) waxay keentay dhimashada shan rayidka, oo ay ku jiraan qof naafo ah.
"Ciidamada dawladdu waxay ku kacayaan xad gudubyo ka dhan ah dadka ku nool meelaha ay ku hadlaan ee Cameroon," ayuu yiri Lewis Mudge, agaasimaha hay'adda Human Rights Watch ee Central Africa.
War saxaafadeed uu soo saaray shalay ayaa lagu sheegay in 11, guddoomiye Lele Lafrique uu sheegay in macluumaadkani uu ahaa mid been abuur ah isla markaana loogu talagalay in lagu mamnuuco dadaalka xukuumadda ay ku soo celinayso xaaladda caadiga ah ee gobolka.
Hay'addu waxay sii waday in ay sheegayso in ciidamada amnigu kaliya bartilmaameed u yihiin goobaha qarinta ee kala go'a iyo ma aha dadka rayidka ah. Wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay Guddiga Hub ka dhigista, Dib-u-habeynta iyo dib-u-heshiisiinta uu sameeyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda, isagoo tilmaamaya in dhallinyaro badani ay ka tageen hubkooda ayna ku biireen xarumaha dib-u-heshiisiinta.
Ugu dambeyntii Adolphe Lele Lafrique wuxuu ku booriyay dadka isticmaala warbaahinta bulshada in ay muujiyaan xakameynta macluumaadka been abuurka ah, si ay fursad ugu helaan nabadda Cameroon.